1932 a mụrụ Robert Anton Wilson.
1938 a mụrụ Kerry Wendell Thornley.
1941 A mụrụ Gregory Hill.
1957 Thornley na Hill nwere nkpughe nke Eris, Greek Goddess of Chaos (Latin Discordia), na Bowling na East Whittier, California.
1959 Thornley sonyeere ndị US Marines wee zute Lee Harvey Oswald na El Toro Marine Base n'akụkụ Santa Ana, California.
1963 Mgbugbu nke Onye isi ala John F. Kennedy na Dallas Texas, na ogbugbu nke Lee Harvey Oswald nke Jack Ruby mechara ụbọchị abụọ ka e mesịrị.
1965 Hill mepụtara mbipụta mbụ nke Isi nke Discordia. Kerry Thornley bipụtara akwụkwọ akụkọ, Oswald, na lụrụ Cara Leach.
1967 Thornley na Hill zutere Robert Anton ('Bob') Wilson.
1969 Hill guzobere Joshua Norton Cabal.
1975 Usoro Ihe Omuma nke Ọhụụ site na Robert Shea na Robert Anton Wilson. Discordianism ghọrọ akụkụ nke ọdịbendị na-ewu ewu n'Ebe Ọdịda Anyanwụ.
1995 Discordianism guzobere ọnụnọ Internetntanetị a ma ama site na World Wide Web.
1998 Kerry Thornley nwụrụ.
2000 Greg Hill nwụrụ.
2007 Robert Anton Wilson nwụrụ.
Kerry Thornley na Greg Hill zutere n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị na East Whittier, California na 1956. Ha, na ndị enyi ha Bob Newport na Bill Stephens, bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi Mad magazin, akụkọ sayensị, akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na nkà ihe ọmụma. Na 1957, ndị enyi na-aṅụ mmanya n'ime awa iri abụọ na anọ n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe ha kwuru na ha nwere ọhụụ nke chimpanzee nke gosipụtara ha Sacred Chao, ihe nnọchianya yiri nke yin-yang, na pentagon na otu ọkara, na akara apple Kallisti (“Nke kachasị mma”) na ọkara nke ọzọ. Chao dị nsọ bụ akara nke Eris, Chi nwanyị nke Chaos (Discordia na Latin). Abalị ise ka nke a gasịrị Eris n'onwe ya pụtara Thornley na Hill. Ọ gwara ha:
Abiala m ịgwa gị na ị nweere onwe gị. Ọtụtụ afọ gara aga, Nghọta m hapụrụ mmadụ, ka o wee nwee ike ịzụlite onwe ya. M laghachiri iji chọpụta na mmepe a na-eru nso, ma egwu na nghọtahie na-egbochi ya. Ị wuola onwe gị ihe eji ejiji nke ime mmụọ ma gbanye n'ime ha, ọhụụ gị na-egbochi gị, mmegharị gị bụ ihe na-egbuke egbuke ma na-egbu mgbu, akpụkpọ gị dị ọcha, a na-egbukwa mmụọ gị n'anyanwụ. Adị m ọgba aghara. Abụ m ihe nke ndị na-ese ihe na ndị ọkà mmụta sayensị na-emepụta afọ ndụ. Abụ m mmụọ nke umuaka na umu ya na-eji chie ochichi. Adị m ọgba aghara. Ana m adị ndụ ma ana m agwa gị na ị nwere onwe (Malaclypse the young 1994: 2-3).
O doro anya na ederede na ajụjụ ọnụ na Thornley, Hill na ndị ọzọ na nke mbụ a, a na-akpọ Discordianism dịka egwuregwu, okpukpe nke okpukpe nke gosipụtara ọdịiche nke isi Christianity, na ọdịdị nke ịhụ ihe onwunwe na ọdịdị kwekọrọ na America .
Edere mmalite na ozizi nke Discordianism Isi nke Discordia, nke mbụ nke Greg Hill dere ma bipụtara (dị ka akwụkwọ ise xeroxed) na 1965. Isi nke Discordia (a makwaara dị ka 'Magnum Opiate nke Malaclypse the Little', nke a na-ederede aha ya Otú m si chọta Chineke na ihe m meere ya mgbe m chọtara ya) bụ 'zine na-adịghị ahụkebe, nke nwere eserese esere n'aka, nchikọta nke ihu ihu, nhọpụta ndị ahọpụtara nke akwụkwọ ndị achọtara, na oge ịkpa ọchị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na o nweghị akụkọ dabara adaba ma ọ bụ nkuzi ndị a na-akụzi, nkà ihe ọmụma kọwapụtara Isi nke Discordia O doro anya na agha bụ nanị eziokwu, na usoro doro anya (Ụkpụrụ Aneristic) na nsogbu ahụ doro anya (Ụkpụrụ Eristic) bụ nanị ntụgharị uche, nke ụmụ mmadụ kere iji nyere ha aka ịnagide eziokwu. Ọhụụ nke ụmụ mmadụ na-enweghị isi, mgbakọ na-emegbu mmadụ, ịgba ohu ụgwọ, ịda mbà n'obi na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ, sitere na Curse nke Greyface, tụlere na ngalaba na-esote. Isi nke Discordia ghọrọ usoro ọdịnala: ọ nwere ohere ịnweta ya niile n'okpuru ihe Hill na Thornley kpọrọ "Kopyleft," ọ bụ ihe mbụ, mara nkọ, ma na-atọ ọchị (Cusack 2010: 28-30).
Thornley sonyere na Marines na 1959, wee zute Lee Harvey Oswald mgbe ọ nọ na El Toro Marine Base dị nso Santa Ana, California. Ndị ikom abụọ ahụ maara maka ọnwa atọ ma kpaa ọtụtụ mmasị; Oswald mere Thornley obere oge iji nweta ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ekpe (nke a dị mkpụmkpụ, o mesịrị nakweere nkà ihe ọmụma Ayn Rand, Objectivism, tupu ya abụrụ onye anarchist). Mgbe e gburu President John F. Kennedy na Dallas, Texas na 1963, e jidere Lee Harvey Oswald maka mpụ ahụ, ma Jack Ruby gburu ya obere oge. Thornley gbara akaebe banyere onye ya na Oswald mara na Warren Commission na 1964, ma laghachi na California na enyi ya nwanyị bụ Cara Leach iji dezie akwụkwọ libertarian, Onye oru ohuru. Thornley na Leach lụrụ na 1965, afọ ya akwụkwọ Oswald na mbipụta mbụ nke Isi nke Discordia ha abụọ pụtara (Gorightly 2003: 64-69).
Na 1960s, Hill na Thornley mepụtara okpukpe ha mmadụ, Malaclypse nke Nta (Mal-2) na Omar Khayyam Ravenhurst (Lord Omar). Bob Newport bụ Dr. Hypocrates Magoun na Robert Anton ("Bob") Wilson, onye Hill na Thornley zutere na 1967, ghọrọ Mordecai the Foul. Nnukwu nzukọ a mere afọ iri mgbe mmalite nke Discordianism. Ma Mal-2 na Omar agbanweela n'oge ahụ, n'otu akụkụ n'ihi ahụmịhe Omar nwere na onye ọka iwu Jim Garrison na-achụ ya dị ka onye a na-enyo enyo na ogbugbu Kennedy (Gorightly 2003: 57-62). Na 1969, Mal-2 guzobere Joshua Norton Cabal, aha ya bụ San Franciscan na-enweghị ebe obibi bụ onye kwupụtara na ya bụ Emperor nke United States. Otu a kpaliri nguzo ndi ozo Discordian. Discordianism, bụbu okpukpe nke chi nwanyị, kwagara na nduzi nke Ọchịchị Paganism nke oge a na 1966 mgbe Thornley sonyeere Kerista, bụ nnwale nnwale mmekọahụ malitere na mmalite 1960 nke John "Nwanna Jud" Presmont. Margot Adler kwuru na ojiji mbụ nke "ndị ọgọ mmụọ" iji kọwaa okpukpe nke okike bụ Thornley na 1966, mgbe ọ dere, "Kerista bụ okpukperechi na ọnọdụ nke Kerista bụ nke ịdị nsọ. ememe, nkwenkwe, ozizi na akụkụ Akwụkwọ Nsọ. Kerista dị nsọ karịa nke ahụ. O yikwara ka okpukpere chi nke owuwa anyanwu na, kwa, ihe a na-akpo okpukpe ndi ekpemekpe nke odida anyanwu ndi Kristian. Ebumnuche ya ịbụ ịbụ ahụmahụ okpukpe… ”(Adler 1986: 294).
Isi okwu Discordian dị mkpa banyere izu ọjọọ ahụ gbasikwara ike na njedebe 1960s. Thornley gbanwere echiche ya na Oswald naanị gburu Kennedy mgbe ọ zutere David Lifton, onye nkatọ siri ike banyere Warren Commission. Ogbugbu Kennedy gbara ogologo ndò n'elu Thornley, ka Jim Garrison na-achụ ya na mbọ iji gosipụta na o so na nkata Oswald. Na February 8, 1968, Thornley kwuru okwu banyere ihe ndị a na Ọfịs Attorney Attorney nke New Orleans. O degaara Hill akwụkwọ na February 17, “Achọrọ m ịnyịnya ibu m na akwụkwọ akụkọ spy dị ọnụ ala. Ma ugbu a nke ahụ pụtara na m karịrị isi m ”(Gorightly 2003: 97). Ọgba aghara ya na-eto eto gosipụtara na omume Discordian dị ka "Operation Mindfuck" nke ya na Bob Wilson bidoro na 1968. Nke a bụ "Marx Brothers version nke Zen," ezubere iji mebie echiche ndị bụ isi nke eziokwu, ma tinye aka na nnupụisi obodo, omenala jupụta, imebi emebi na ịrụ ọrụ nka, na usoro ndị ọzọ (Gorightly 2003: 137). Ebumnuche ya bụ nghọta nke okpu agha.
Robert Anton Wilson mere ka nkwenkwe Discordianism dịkwuo njọ. Wilson, bụ onye na-adị ndụ ogologo oge ma nwee obi abụọ, bụ n'agbanyeghị nke ahụ, enwere mmasị na ụdị ọhụụ ọ bụla. Ọ bụ enyi nke Timothy Leary, onye na-akwado arụmụka na-akwado ọgwụ ọjọọ, ma gbaa ajụjụ banyere onye edemede Zen bụ Alan Watts, maka Onye Nyocha, magazin a na-ahụkarị. Na 1975, ya na onye na-ede akụkọ ụgha Robert Shea dere, bipụtara ihe dị ukwuu, akwụkwọ mpịakọta, akwụkwọ edemede, Na-egbuke egbuke! Nkeji, bụ nke mere ka ọ bụrụ na ndị mmadụ na-abanye na omenala a ma ama. N'afọ iri abụọ na abụọ, ndị nwe ụlọ bụ Thornley na Hill nọ na-achịkwa, okpukpe ahụ gbasakwara site n'okwu ọnụ, nkwonkwo onwe onye, ​​na 'zines, bụ nke a na-ejedebe. Site na 1988, Na-egbuke egbuke! bụ akwụkwọ kasị elu na-ere ahịa nkà mmụta sayensị dị na United States; e mere ya n'ime opera opera ma merie onyinye (LiBrizzi 2003: 339). Akwụkwọ akụkọ ahụ nwere mgbagwoju anya, nkwekọrịta nkwekọrịta nke a ga-atụle n'okpuru. Karịsịa, Shea na Wilson sụgharịrị ọtụtụ ihe odide nke Isi nke Discordia n'ime ya, na-emeri nnukwu ndị na-ege ntị maka akụkụ Akwụkwọ Nsọ subcultural. Ihe omuma banyere ndi na-ekwegh ekwe ka ndi mmadu ghara ikwusi ike, ha abanyekwa na omenala omenala.
Na ngwụsị 1970s, Hill hapụrụ okpukpe, bụrụ onye ọrụ ụlọ akụ mgbe ịgba alụkwaghịm na-egbu mgbu. Thornley, na mmekorita ya na onye agha Vietnam Camden Benares (onye amụrụ John Overton), mepụtara Zenarchy, nke o lere anya "usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na ntụgharị uche" (Thornley 1991). O weghaara aha ya Chi Chi Zen n'oge a. 1989 bu akara nke uzo nke ato nke akuko banyere Discordianism. Mgbe Internet dị adị kemgbe ngwụsị afọ ndị 1950, ọkachasị n'ime ndị agha, na 1989 ka e hibere Web Wide Web. N'ihi na ọ gafere n'etiti ndị ọgba aghara, ndị egwuregwu, ndị na-egwu egwu, ndị na-ese ihe, kọmputa "nerds" na ndị mgbaasị, Discordianism mere mgbanwe na-enweghị ntụpọ na Weebụ (Cusack 2010: 44-45). Na narị afọ nke iri abụọ na mbụ, okpukpe na-etu ọnụ cabal n'ịntanetị, ebe nrụọrụ weebụ raara nye Thornley, Hill, Wilson na ndị Discordians ndị ọzọ a ma ama, na ọtụtụ saịtị na ozi ndị ọzọ metụtara ya. N'ime afọ iri nke Discordianism, site na 1997 ruo 2007, Kerry Thornley nwụrụ na 1998, Greg Hill nwụrụ na 2000, na Robert Anton Wilson nwụrụ na 2007.
N'ime uwa ndi ozo, Eris na nwanne ya abia Aneris bu umua nwanyi. Eris dị umuaka na ihe okike, ebe Aneris bụ na-ebibi ma na-ebibi. Iwu Eris nyere iwu, nke kpatara ọgba aghara (nke na-eme ka ọ ghara ịhapụ ya ma ọ bụrụ na ihe niile bụ ọgba aghara). Ọhụụ na-emekwa ka nwa nwoke, Ime mmụọ, na iwu na ọ bụrụ na Aneris gbalịrị imebi ọnọdụ ime mmụọ, a ga-atụgharị ya n'ime mkpu. Nke a ghọrọ ozizi nkuzi banyere ọdịdị mmadụ; "Ya mere ọ ga-abụ na enweghị ndụ ga-ewepụ anyị azụ na ịdị adị a na-agụghị aha ga-alaghachi na mkpu, dịka nwa ike gwụrụ na-abịa n'ụlọ site na oké ọhịa circus" (Malaclypse the young 194: 58). Nghọta nghọta nke eziokwu bụ eziokwu, echiche nke a na-aghọtakarị na ọ bụ n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ. Discordianism na-ekwu na mmegide nke ọnụọgụ abụọ bụ ihe efu (nwoke / nwanyị, usoro / nsogbu, dị njọ ma ọ bụ ọchị) ma kwenye ịdị n'otu. Ndị na-eso ụzọ na-agbaso ọnọdụ Mal-2, na-ajụ "ajụjụ eziokwu ahụ" na-ekwu na ihe nile bụ eziokwu, gụnyere ihe ụgha. Ajuo ya otu esi aru, ma zaa ya, "Amaghi m nwoke. Emeghị m ya "(Malaclypse the younger and Omar Khayyam Ravenhurst 2006: 34).
Ya mere, ọ dịghị mkpa nye ndị Discordians ma hà kweere n'okpukpe ahụ, ma ọ bụ nabata otu njirimara nke Ndị Kraịst dị ka egwuregwu. Maka ndị ọkà mmụta bụ iso na Chaos ebighi ebi, nke na-enweghị mmasị na ya bụ Eris (Cusack 2011: 142).
A kọwara ihe omimi abụọ ọzọ dị na ya Isi nke Discordia. Nke mbụ bụ "Original Snub," nke na-elekwasị anya na apụl ọla edo nke Eris esemokwu, onyinye nke "kachasị mma." N'okwu a, Eris rutere agbamakwụkwọ nke Thetis na ndị dike Peleus na-ewe oké iwe ka di na nwunye ahụ akpọghị ya. Ọ tụpụrụ apụl na ndị ọbịa ahụ, n'ihi na chi nwanyị ahụ rụrụ ụka banyere onye kwesịrị inweta ya. Ogwu a na-enye apple a Paris ka Aphrodite chi nwanyị nke ịhụnanya, nke ndị na-agba ọsọ ya bụ Athena na Hera na-ewe iwe (Littlewood 1968: 149-51). O kwere nkwa Paris nwanyị kachasị mma n'ụwa, Helen nke Sparta, nke dugara Trojan War mgbe di ya Menelaus na Agamemnon nke Mycenae wakporo Troy. Ụdị njirimara nke akụkọ ifo ahụ bụ Eris "na-eri ọṅụ na nkịta dị ọkụ" mgbe ọ kwụsịrị, na-ejedebe "ya mere anyị na-ata ahụhụ n'ihi ụtụtụ mbụ. Ya mere, Onye Ọchịchị bụ ịṅụ nri Ọ dịghị Egwuregwu Ngwá Agha. Ị kwenyere nke ahụ? "(Malaclypse the young 1994: 17-18). Echiche nke abụọ bụ "Nkọcha nke Greyface," nke na-akọwa nhụsianya nke ụmụ mmadu, nke bụ n'ihi "anụ ọhịa anụ ọhịa hunchbrain," Greyface, onye na 1166 TOA kụziri na ọchị na egwu mebiri Ezigbo Iwu, ọnọdụ nke eziokwu. Greyface na ndị na-eso ụzọ ya "maara ọbụna ibibi ihe ndị ọzọ dị ndụ bụ ndị ụzọ ndụ ha dị iche na nke ha," nke mere ka ụmụ mmadụ "na-ata ahụhụ site na enweghị uche na nke ime mmụọ" nke a kpọrọ Curse of Greyface (Malaclypse the young 1994: 42). Ihe omuma ndi a na-akuzi na mmadu kwesiri inwe nnwere onwe.
Ụkpụrụ nke Discordianism bụ Iwu nke Fives, nke na - ekwu na "ihe nile na - eme na fives, ma ọ bụ na - ise… [na] Iwu nke mmadụ enweghị njọ ”(Malaclypse the Younger 1994: 16). Pentagon na Sacred Chao bụ akụkụ ise, Iwu Iwu na-ebute 23 bụ ọtụtụ ihe dị mkpa maka ndị Discordians, dị ka 2 + 3 = 5. Pentabarf, ọrụ Discordian nke okwukwe ("catma," nke na-agbanwe agbanwe ma na-adịru oge, ma ọ bụghị "nkwenkwe," nke siri ike na anaghị agbanwe agbanwe), nwere ụkpụrụ ise (Malaclypse the Younger 1994: 4):
M - Onweghi Chi ma chi nwanyi Ya bu Chi Gi. Onweghi ndi ndi Erisia mana ndi Erisian Movement na obu ya bu ndi ndi Erisia. Ebe ọla edo Apple Apple ọ bụla bụ ebe a hụrụ n'anya nke Golden Worm.
II - Onye Discordian ga - eji sistemụ nọmba akwụkwọ Discordian.
III - Achọrọ onye Discordian ka ọ bụrụ, Fraịdee mbụ mgbe ọ nwusịrị ìhè, Gbanyụọ Naanị & Kere Ọyoụ nke Nkịta Na-ekpo ọkụ; Ememe ofufe a iji gosipụta megide okpukpe ndị a ma ama nke ụbọchị: nke Roman Catholic Christendom (enweghị anụ na Fraịde), nke okpukpe ndị Juu (anụ ezi anụ ezi), nke ndị Hindic (anụ anụ), ndị Buddha (enweghị anụ anụmanụ) ), na nke Discordians (enweghị Hot Dog Buns).
IV - Onye Discordian ga - ekere òkè na ọkụ ọkụ ọ bụla, n'ihi na nke a bụ nkasi obi nke chi nwanyị anyị mgbe a na - atụgharị ya na Snub mbụ.
V - A machibidoro Discordian ikwere ihe ọ gụrụ.
Nkwupụta nke okwukwe a bụ ihe egwu: isi ihe na-echeta ọrụ Islam nke okwukwe (shahada); isi nke atọ na-akwa mgbochi nri; ma isi nke ise na-enye aka inwe obi abụọ n'ebe okwukwe okwukwe kpuru. N'ihe banyere mmuo, a gwara ndị nkuzi na ha ga-elebara anya na-eme ka ọ bụrụ ebe a ga-esi nweta ihe ọmụma karịa ụbụrụ ma ọ bụ obi.
Otu ozizi ọzọ dị mkpa nke chọrọ mkparịta ụka bụ ụdị nkwekọrịta nke Discordian worldview. Isi okwu Discordia nwere ihe ndị na-ezo aka na Illuminati, isiokwu a bukwara ibu karịa mgbe akwụkwọ Shea na Wilson bipụtara. Na-egbuke egbuke! Nkeji (1975). Ihe akụkọ Bavarian Illuminati bụ usoro nke ọkà mmụta bụ Adam Weishaupt (1748-1830) guzobere. Ya, na mmadụ anọ ọzọ, malitere iwu ahụ na 1776, ọnụ ọgụgụ na-etolitekwa mgbe Baron Adolf Franz Friederich Knigge, Freemason, sonyere na 1780. A kwadoro iwu ahụ na 1784, ma na-ebi na nkwekọrịta nkwekọrịta ruo ugbu a (Cusack 2010: 34-35). Na Na-egbuke egbuke! Nkeji David Robertson kọwara nke a: "[i] ts central motif bụ ịme nkwekọrịta aghụghọ niile dịka ezie na ọ bụ eziokwu, ọ na - ejikọkwa Discordianism na igbu egbugbu John F. Kennedy, ọdịmma nzuzo nke Nazism, nkume na egwu egwu na HP Lovecraft's Ụgha akụkọ Cthulhu, n'ime ihe dị ka narị asatọ na peeji nke psychedelic gum "(Robertson 2012: 429). The Illuminati, onye bu n'obi ime ka njedebe nke ụwa na Woodstock Europa, ememe a na-eme ememe na Ingolstadt, na-alụ agha na ndị ziri ezi oge ochie nke Mummu (JAMS), nke ndị enigmatic Hagbard Celine, isi nke Legion nke Ọdịiche Dynamic. Ndị edemede "onye ọ bụla", ndị odeakụkọ George Dorn na Joe Malik, na ndị nchọpụta bụ Saul Goodman na Barney Muldoon, niile na-esonye n'ọgụ n'etiti Illuminati na JAMS. N'akụkọ akwụkwọ akụkọ ahụ, Hagbard Celine gosipụtara na ọ bụ otu n'ime isi ise nke Illuminati (tinyere Wolfgang, Winifred, Werner na Wilhelm Saure, ndị otu òtù ndị agha na-akpọ Association Medical Association nke America). Mmadụ anọ a nwụrụ na Woodstock Europa, mgbe Eris gosipụtara na ịmalite ibudata Illuminati iji kpọte ndị agha Nazi ndị agha ezoro ezo na Lake Totenkopf (Shea na Wilson 1998 ). Celine na-egosi na ezigbo ndị òtù Illuminati na-achọ naanị ịtọhapụ ha niile.
Mkpesa ahụ dị oké mkpa maka Discordianism, ma n'ihi mkpa nke Illuminati na fraternities ndị ọzọ na-enweghị atụ, dịka
ndị na-egbu ọchụ, kamakwa dị ka akụkụ nke ndụ Kerry Thornley mgbe a nwụchara Kennedy. Na njedebe nke 1970s, ọ gbadara na ndị ọbịa, na-ekwenye na ndị enyi ya dochie anya anya-alikes nakwa na ọ na-ebi na ọrụ nke Mindfuck. Otu isi okwu nke Discordian, ụda, nke bu ihe omuma nke gbasaa n'uwa zuru oke Isi, mana Shea na Wilson na-eme ka ọ pụta ìhè, n'ihi na ikike nke "ịhụ fnords" bụ àgwà nke ihe odide ndị a ma ama (Wagner 2004: 68-69). Mgbe afọ ole na ole Thornley nọ na-agba ajụjụ ọnụ na onye nta akụkọ bụ Sondra London. Ndị a dị na YouTube, na ederede zuru ezu nke ajụjụ ọnụ, akpọ aha Ihe nchịkọta Dreadlock, wepụtara na 2000 (Thornley 2007). Thornley site na mgbe ahụ weere Discordianism dị ka Buddhist Zen na ọdịdị, ọ bụkwa eziokwu na ụwa ya abụghị nke abụọ, echiche dị mma nke eziokwu bụ nke ọgba aghara na-enye nsogbu. Echiche a kwekọrọ na ọtụtụ okpukpe ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ bụ ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị na-eme ihe omimi; dị ka Isi nke Discordia kwuru, "nkwenye niile bụ eziokwu n'echiche ụfọdụ, ụgha n'echiche ụfọdụ, ihe na-abaghị uru n'echiche ụfọdụ, eziokwu na ụgha n'echiche ụfọdụ, ezi na enweghị isi na ụfọdụ, ụgha na ihe na-abaghị uru n'ụzọ ụfọdụ, na eziokwu na ụgha na ihe efu na ụfọdụ "(Malaclypse the young 1994: 39-40).
N'ihe gbasara ememe, enwere naanị ihe ngosi Isi nke Discordia. Iji gwa ndị mmadụ okwu ọjọọ, ha na-agwa ndị nkụzi ka ha mee omenala Turkey Curse, bụ nke na-akpọ ikike ime mmụọ ka ọ kwụsịtụ Curse nke Greyface, bụ nke na-emegide ndụ. Ime mkpọsa Turkey na-agụnye ịtu aka gị ma na-abụ abụ "GOBBLE, GOBBLE, GOBBLE, GOBBLE, GOBBLE, GOBBLE. Ihe ga-esi na ya pụta ga-apụta ozugbo "(Malaclypse the younger and Omar Khayyam Ravenhurst 2006: 175). O yikarịrị ka ịgba egwú ahụ mgbe ọ na-eme mkpọtụ na-eme ka mmụọ nke onye ọ bụla dị oke njọ ma ọ bụ nke e kewapụrụ na egwuregwu (Cusack 2010: 30). Ememme ndị ọzọ na Isi nke Discordia gụnyere "EBE Baptism Rite," nke na-agụnye ihe okike, ịgba egwu na mmanya, na "Nkume Dị Nsọ nke Eris nke Krispy Kreme Kabal," nke gunyere (Cusack 2011: 134).
Enwekwara otu ihe omuma atu puru iche nke echiche ndi isi nkpagbu; "Nyocha ndị dọkịta na-anwapụta na-eme ka ọ daa mbà", nke a kpọrọ "na mgbaasị." Nke a na-arụ ụka na ndị odeakwụkwọ nke Ebe Ọdịda Anyanwụ na-echegbu onwe ha banyere mmegide binary (ezi / ọjọọ na nwoke / nwanyị), mgbe ha na-eleghara ihe ndị kacha mkpa, ọgba aghara na ihe di egwu, nke di egwu, nke chi nwanyi Eris. A na-ekwu mgbe ahụ, sị:
... mgbe ndị odeakwụkwọ na-amụta ịbịakwute nkà ihe ọmụma dị ka nkà na-enweghị atụ karịa eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha, ma mụta inwe ekele maka nhụsianya nke mgbalị ụmụ mmadụ, mgbe ahụ, ha ga-enwe ike ịmalite iji nkà ha na-arụ ọrụ, ma nwee ike ịghọtakwu nghọta nke ya, ya mere nata anwansi di irè. CHAOS BỤ ECHIKE. Nke a bụ ihe ịma aka dị mkpa (sic) na echiche nile nke echiche anwansi nke ọdịda anyanwụ, POEE ji obi umeala na-enye mbido isi mbụ na mgbaasị kemgbe Solomon (Malaclypse the younger 1994: 61).
Nkwupụta ahụ bụ na Chaos bụ ike na - akọ banyere Discordianism na ọnọdụ nke Chaos magick, ihe mgbagwoju anya a na - enweghị atụ na - emegide nrọ nke Peter Carroll, Ray Sherwin, na ndị ọzọ na njedebe 1970s (Sutcliffe 1996: 127-128).
Dị ka e kwuru n'elu, Kerry Thornley bịara chee na Discordianism bụ "ụdị ndị America nke Zen Buddha" (Wilson 2003: 11). Ya mere, ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enwe ọchị ma na-ezighị ezi bụ ụzọ ha ga-esi ghọta ya satori, nkuzi nke oge Zen ("ịhụ fnords"). N'ụzọ doro anya, Mindfuck ọrụ na-enyefe kaadị na "Enweghị enyi n'ebe ọ bụla" na "enweghi onye iro ọ bụla" n'akụkụ ọ bụla nwere ike ịkọwa dị ka ememe nke e mere iji nweta nghọta, ebe o nwere ihe yiri nke ahụ. ọ bụghị usoro nchịkọta usoro ọzụzụ nke ndị okenye na-ahụ n'ụlọ akwụkwọ Rinzai nke Zen (Cusack 2010: 50). Dika Discordianism bu nke di na Paganism, ndi ndi ozo na-efekwa chi ndi na-abara ha uru, n'ememe ndi omenala. Ọ bara uru ịkọwa na Na-egbuke egbuke! Nkeji na-eme ka okpukpe ndị ọzọ na-adabere na ntụrụndụ, dị ka Shea na Wilson jiri Cthoul Mythos (mepụtara site na HP Lovecraft ma gbasaa, site na mmalite nke lloigor, site na Colin Wilson), nke na-akọwa "chi ndị gbara ọchịchịrị" dị ka Yog-Sosoth, Azathoth, na Nyarlathotep (Hanegraaff 2007: 85-109).
N'ọmụmụ banyere ndị Finnish Discordians, Essi Mäkelä na Johanna Petsche na-edekọ ihe banyere ememme ndị ọhụrụ Discordian, nke gụnyere "na-efe efe kabeeji," na-eme ka "njem njem gaa na ihe oyiyi gorilla rubbery na Helsinki," na ịtụgharị uche "gburugburu plastic apụl "iji nweta ihe ọmụma banyere ụmụ anụmanụ na-adịghị mma, echiche nke maara shamanism (Mäkelä na Petsche na-abata). Nyocha a na-eme n'oge a na-egosi na ndị Discordians na-aga n'ihu n'usoro ihe ọhụrụ na mmepe dịka usoro ndụ ha si dị.
Isi nke Discordia onye a na-ahazi n'usoro nhazi maka nsogbu nke Discordianism. Ndị òtù malitere site na ịbanye na Discordian Society, nke nke Isi kwuru, "Discordian Society enweghị nkọwa." (Malaclypse the younger and Omar Khayyam Ravenhurst 2006: 93). A na-ekewa Discordianism n'òtù abụọ; Paratheo-Anametamystikhood nke Eris Esoteric (POEE), nke Mal-2, na Erisian Liberation Front (ELF) malitere, nke ntọala site n'aka Omar. Uzo a na-emegiderịta onwe ya gosipụtara ụkpụrụ nduzi bụ "Ndị Nkwenyere Anyị Ga-agbachitere" (Adler 1986: 332). A na-agba ndị òtù ume ume ịghọ onye Episkopos (Greek “onye nlekọta,” na-aghọta okwu Bekee ahụ bụ́ “bishọp”) site n’ịtọ òtù nkewa ha. Ka oge na-aga, e nyere ndị niile na-arụ ọrụ ọkwa popu, na ibụ onye otu Discordian bụ usoro dị mfe nke njirimara onwe onye.
Otú ọ dị, ọbụna na-enweghị njide onwe onye Discordians na-ekwu na mmadụ ọ bụla bụ onye so na popu, nke pụtara na
Discordianism bụ "okpukpe na-eto ngwa ngwa n'ime ihe niile e kere eke (Discordians na-eto eto n'otu ọnụ ọgụgụ dịka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ)" (Chidester 2005: 199). N'agbanyeghị na a na-ewere POEE dị ka "nhazi na-abụghị onye amụma na-enweghị usoro okpukpe" na Discordianism "paradaịs onye anarchist" (Adler 1986: 332), dị ka ndị a kpọtụrụ aha n'elu na-ezukọ iji mee okpukpe. A na-akpọ otu discordian "cabals" (site na kabbalah, usoro ihe omimi ndi Ju). Ndị na-enweghị nkụda mmụọ ekwesịghị ịbanye n'ụgbọala, mana ndị otu na-emekarị. Na mmalite narị afọ nke iri abụọ na otu, ọtụtụ cabala nọ na ntanetị (Narizny 2009).
E nwere ihe àmà na Hill na Thornley bịara nata eziokwu nke Eris. Margot Adler gbara ajụjụ ọnụ n'Ugwu na Na-agbada Ọnwa (1979), ebe o kwetara na ọ bụ onye na-ekweghị na Chineke na 1950s na Discordianism malitere dị ka okpukpe nke okpukpe. Site na 1970s, echiche ụwa ya agbanweela, o kwetara na:
Eris bụ ezigbo chi nwanyị ... Na mbido, ahụrụ m onwe m dịka ụda ọkụ. Eji m onwe m mara Malaclypse nke Ntà. Ma ọ bụrụ na ịmee ụdị ihe a nke ọma, ọ malitere ịrụ ọrụ. Na oge kwesiri ka ndi mmadu di n'etiti ekweghi na Chineke na ihe ndi ozo abia ihe efu. Njikọ ahụ dị nnọọ njọ. Mgbe ị na-agafe otu, ị na-agafe nke ọzọ. Amalitere m n'echiche bụ na chi niile bụ ihe efu. Na njedebe m mụtara na ọ bụ dị gị n'aka iji kpebie ma è nwere chi dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-ewere chi nwanyị mgbagwoju anya, ọ ga-ezite gị dị ka ihe dị omimi ma dị irè iji mee njem dịka ịchọrọ chi dịka Yahweh. Njem ahụ ga-adị iche, mana ha ga-abụ ndị na-agafe agafe (Adler 1986: 335).
Adler enweghị ike inyocha Thornley, bụ onye na-arịwanye elu ma na-etinye aka na nke 1970s, ma Hill gwara ya na mgbanwe yiri nke Discordianism emewokwa maka Omar. N'ihe dị ugbu a, ọ bụ ihe kachasị ama ama, Thornley gwara Hill, "Ị maara, ọ bụrụ na m ghọtara na ihe a nile ga-abịa ezi, M gaara ahọrọ Venus "(Adler 1986: 336).
Ọ bụ ezie na Malaclypse nke Nta nọ n'ọnọdụ nke Polyfather nke okpukpe ruo mgbe etiti 1970s, Discordianism nke oge a bụ okpukpe nke ndu na usoro nhazi nke iwu na-abaghị uru. E nwere ọtụtụ ìgwè Discordian, plethora nke weebụsaịtị, na ndị mmadụ na-enye okpukpe ha dị ka 'Discordianism' na mba ndị ebe nchịkọta data nchịkọta gụnyere ajụjụ banyere okpukpe. Ma, n'omume na n'agbanyeghị nkwupụta nke ike nke Eris mere site na Hill na Thornley kwuru n'elu, ndị nkụzi nke oge a (dịka ndị na-akpọrọ onwe ha dị ka ndị Ala, dịka Discordianism hụrụ niche dị ka ọdịdị nke ndaghachi okpukpe) ga-ekwere na Eris dịka chi nwanyị, ma nwee ike ịjụ nkà mmụta okpukpe dịka akụkọ ifo, ihe atụ, ma ọ bụ egwuregwu (ma ọ bụ atọ atọ n'otu oge). Ndị na-eso ụzọ na-ejikọta okpukpe ha mgbe niile na ụzọ nke ụzọ ime mmụọ ndị ọzọ, ma ọ bụ ọbụna ekweghị na Chineke ma ọ bụ ndị na-ekweghị na Chineke (Cusack 2010: 47).
Ndị ọkà mmụta ọdịbendị na agụmakwụkwọ na-akwa emo megide Discordianiam dịka "okpukpe ụgha," na ịmụrụ ya akwụkwọ oge dị ka okpukpe ọhụrụ dị ntakịrị (Cusack 2010: 27-52). Ihe kpatara kpatara enweghị nnyocha siri ike banyere Discordianism, na maka ntanye ya na na na, dị atọ. Nke mbu, okpukperechi di oke egwu, ya mere ochicho na njakịrị ekwesighi. Nke abụọ, ndị guzobere ya kwetara na ọ bụ akụkọ ifo (na ọrụ ndị ha mechara nwee okwukwe ekwesighi ntụkwasị obi ma ọ bụ kwenye ha). N'ikpeazụ, ndị otu na-agbakọ na ntanetị ma ha enweghị ụlọ ụka, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọgwụ dịka okpukpe "ezigbo". Agbanyeghị, ọ nwere ike bụrụ na enweghị mmuta nke ndị ọkammụta ga-agbasa n'oge na-adịghị anya, ebe ọ bụ ezie na Discordianism yiri ihe na-ekwekọghị ekwekọ na ngwụcha afọ ndị 1950, ọ dịla obere "ihe na-adịghị mma" karịa oge, ebe ọ bụ na ọtụtụ okpukpe ọhụrụ apụtala kemgbe 1960. Ọ bụrụ na a na-eji ihe atụ nke Zen Buddhist nke Kerry Thornley mepụtara na Camden Benares dị ka prism iji nyochaa okpukpe, ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị. Maka Beats na 1950s, Zen na-anọchite anya ịjụ ụgwọ-ịgba ohu na mgbakọ, na ịchụso ụzọ ime mmụọ nke hobo, enweghị iru ala n'ụwa a na ịchọ nghọta (Prothero 1991).
Ndị nkatọ na-ekwenye na ihe dị nsọ bụ nke ụwa, ụwa dịkwa nsọ. Greg Hill gwara Margot Adler na, "mgbe oge ruru, nsogbu ndị dị n'etiti ekweghị na Chineke na ihe a na-eme na-aghọ ihe efu. Njikọ ahụ dị nnọọ njọ. Mgbe ị na-agafe otu, ị na-agafe nke ọzọ "(Adler 1986: 335). Nkọwa nke Adam Gorightly banyere afọ ikpeazụ nke Thornley na-egosi na ọ na-ebi n'akụkụ ya, na-ere akwụkwọ akụkọ libertarian ma na-eme ihe ọ kpọrọ "Zen na nkà nke efere efere" (Gorightly 2003: 233-34). Njem ime mmụọ nke ndị abụọ ahụ bụ akụkọ dị ike ma dị egwu nke mgbanwe; ndị ọkà mmụta ugbu a enweghị ụzọ ha ga-esi atụle mmetụta nke ndụ Hill na Thornley na ụmụazụ ha, ma ọ bụ ihe na-adịghị mma na mmetụta ahụ dị oke mkpa. Robert Anton Wilson na akwụkwọ Robert Shea dere ruru ọtụtụ nde mmadụ ma nọgide na-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ; ndị na-achọ mmụọ na ndị jokers na-achọta weebụsaịtị Discordian kwa ụbọchị. Dika ndi mmadu na-eme ka ndi mmadu na-ekpe okpukpe di iche iche na-adọta onodu di elu nke mmuta omumu omumu n'ime afo iri abuo na otu, ma obu ezie na o gaghi abughi ihe di mkpa, ndi mmadu nwere mmasị n'okwukwe ndi okwukwe, na isiokwu dị iche iche nke isiokwu esoteric, dị ka onye mbụ na nke kachasị mkpa nke obere ezinụlọ nke okpukpe ndị e chepụtara echepụta (Cusack 2010).
Adler, Margot. 1986. Ịdakwasị Ọnwa: Ndị Witches, Druids, Ndị Na-efe Chineke, na Ndị Na-eme Ihe Ọjọọ Ndị Ọzọ na America Taa, mbipụta nke abụọ. Boston: Beacon Press.
Chidester, David. 2005. Ezigbo Okpukpe: Okpukpe na omenala ndị America. Berkeley: Mahadum California Press.
Cusack, Carole M. 2011. "Ime Anwansi Na-eme Ihe Ọjọọ: Ịgba Okpukpe, Okpukpe Chaos na Ike nke Egwuregwu." Akwụkwọ bụ International for Studying New Religions 2: 125-45.
Cusack, Carole M. 2010. Okpukpe: Echiche, Ụgha na Okwukwe. Farnham na Burlington, VT: Ashgate.
Gorightly, Adam. 2003. Prankster na Mgbagwoju anya: Akụkọ nke Kerry Thornley na otú o si zute Oswald ma gbaa ume n'enyemaka. New York: ParaView Pịa.
Hanegraaff, Wouter J. 2007. "Fiction in the Desert of Real: Akwụkwọ akụkọ ifo nke Cricul." Aries 7: 85-109.
LiBrizzi, Marcus. 2003. "The Na-egbuke egbuke! Trilogy. "Pp. 339-41 na Echiche ndị aghụghọ na American History: An Encyclopedia, nke Peter Knight deziri. Santa Barbara: ABC: CLIO.
Mäkelä, Essi na Johanna Petsche. 2013. "Ihe siri ike: Discordianism dị ka Okpukpe Ọchịchị." Omenala na Okpukpe: 14 Journal Interdisciplinary: 411-23.
Malaclypse nwa. 1994. Isi okwu Discordia: Otu m si chọta Chineke na ihe m meere ya mgbe m chọtara ya. Austin TX: Steve Jackson Games.
Malaclypse nwa na Omar Khayyam Ravenhurst. 2006. Discordia: Ekele Eris, Chi nke ọgba aghara na mgbagwoju anya. Berkeley: Ronin Books.
Narizny, Laurel. 2009. "Ha Ha Na Na Na Na: Ihe Nmalite Nke Mbụ nke Okpukpe." Akwụkwọ Bachelor of Arts (Honors), Ngalaba Nkà Mmụta Okpukpe, University of Oregon, Eugene, Oregon. Nweta site na https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/9336/Thesis%20Laurel%20Narizny.pdf?sequence=1 na 19 August 2009.
Prothero, Stivin. 1991. "Na Okporo Ụzọ Nsọ: Ogbugbu Beat dị ka Mkpesa Ime Mmụọ." Harvard Theological Review 84: 205-22.
Robertson, David G. 2012. "Na-eme ka ịnyịnya ibu ahụ hụ: Discordianism na Ọrụ nke Robert Anton Wilson." Pp. 421-41 na Akwụkwọ ntụziaka nke New Religions and Cultural Production, nke Carole M. Cusack na Alex Norman dere. Leiden: Ọhụụ.
Shea, Robert na Robert Anton Wilson. 1998 . The Illuminatus! Nkeji. London: akwụkwọ ntanetị.
Sutcliffe, Richard. 1996. "Echere na-ekpe aka ekpe: Otu akụkọ ihe mere eme na nke nkà ihe ọmụma." Pp. 109-37 na Okpukpe Ọjọọ Taa, nke Carlotte Hardman na Graham Harvey dere. London: Thorsons.
Thornley, Kerry Wendell. 1991. Zenarchy. lllumiNet Pịa. Nweta site na http://www.mindcontrolforums.com/hambone/zenarchy.html na 19 August 2009.
Thornley, Kerry Wendell. 2007. Ihe nchịkọta Dreadlock. Portland: Onwe-bipụtara. Nweta site na www.ibiblio.org/ovo127/media/OVO017.pdf na 19 August 2009.
Wagner, Eric. 2004. Otu Nduzi nke nduzi nye Robert Anton Wilson. Tempe, AZ: New Falcon Publications.
Wilson, Robert Anton. 2003. "Nnukwu anụ na Labyrinth." Pp. 8-16 na Prankster na Mgbagwoju anya: Akụkọ nke Kerry Thornley na otú o si zute Oswald ma gbaa ume n'enyemaka, site Adam Gorightly. New York: ParaView Pịa.
Nwere ike 20, 2013
DISCORDIANISM NDỊ NTỤKWU NDỊ VIDIO